Wasiirka Gaashaandhiga Fiqi oo laga kaxeeyey gudaha magaalada Kismaayo lana geeyey saldhiga ciidanka Kenya ee ku yaala Airport magaalada Kismaayo – idalenews.com
Warar lagu kalsoon karo ayaa sheegaaya in ciidamada AMISON oo ilaalo ka haayey wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Mr Fiqi ayaa wasiirka ka saarey hotelka Cascaseey ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo, iyagoo geeyey saldhigooda weyn ee ay ku leeyihiin Garoonka Diyaaradaha Kismaayo oo ku yaala duleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo.
Dhanka kale, Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/xakiin Fiqi ayaa beeniyay warar sheegaya in Kismaayo uu isaga baxay, kadib markii Sarkaal u hadlay Raaskambooni uu sheegay inuu isaga cararay magaalada.
Dagaal maanta mar kale ka dhacey gudaha magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ciidamadii dowlada ee ka dagaalamaayey xaafada Calanleey agagaarka laanta ganacsiga looga awood roonaadey. Wasiirka Gaashaandhiga Somalia Mr Fiqi oo la hadlay Laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay inuu ku sugan yahay magaalada, isla markaana uu wato howshiisa.
“Warkaas waa waxba kama jiraan, magaalada ayaa ku suganahay”ayuu yiri Fiqi oo mar la weydiiyay in Taangiyo ay leeyihiin Ciidamada kenya lagu waardiyeynayo, isagoo sheegay in Mandate-kooda yahay.
C/xakiin Fiqi ayaa dhinac isaga riixay eedeyn ay u jeediyeen maamulka magaalada Kismaayo oo ah inuu abaabulayo dagaalka, isla markaana warkaas yahay mid ay ku qarinayaan dagaalka ay qaadeen.
“waa wax aan sal iyo raad laheyn, warkaas waxay ku qarinayaan dagaalka ay qaadeen oo ay ku andacoonayaan, maxaa yeelay dadka dagaalamaya waa kuwo sheeganaya madaxweyne inay yihiin dowladdana ma aqoonsano”ayuua yiri C/xakiin Maxamuud Fiqi.
C/naasir Seeraar oo ah Afhayeenka maamulka KMG ee Axmed Madoobe ayaa sheegay in C/xakiin Fiqi uu ka cararay magaalada, isla markaana magaalada ay si buuxda gacanta ugu hayaan.
Warar lagu kalsoon yahay oo laga helaayo magaalada Kismaayo gaar ahaan ilo madax banaan ayaa idale News Online u sheegey in ciidamada AMISON ay ka saareen wasiirka iyo wafdigiisa gudaha magaalada Kismaayo iyagoo geeyey dadka Airport magaalada Kismaayo halkaas oo la sheegey inuu hadda ku sugan yahay.
Xaalada magaalada ayaa waxooga yara degan, iyadoo dagaalka uu qaboobay abaarihii 2-dii duhurnimo, iyadoo dagaalkii maanta uu ahaa mid aad u xoogan.
Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabtey + Sawiro + Dhageysi